Taariikhda My Butros » 5 Talooyin Si Samee A Great First Online Aragtida Dating
5 Talooyin Si Samee A Great First Online Aragtida Dating
Last updated: Jan. 21 2021 | 3 min akhri
Marka ay dadku ka hadlayaan dareenkaa u horeeyaana, ay si dhakhso ah u malaynayaa fool-ka-fool ah la xiriir. Si kastaba ha ahaatee, ayaa goor bedelay, iyo sidoo kale dareenkaa u horeeyaana arrin si weyn u la xiriir online ... gaar ahaan marka ay timaado shukaansi online. Markaasuu, xeerarka u fool-ka-fool dareenkaa u horeeyaana ka duwan shukaansiga online dareenkaa u horeeyaana.
Halkee kaaga baxay First Counts: Your Profile iyo Your Email
Haddii aad doorato shukaansiga online ka badan hababka dhaqanka ee shukaansi, waxa ugu horeeya ee waa inaad ku gaadhaan danihiina waa meesha dareenkaa u horeeyaana yihiin dooneysaa wax muhiim. Markaasuu, aad dareenkaa u horeeyaana la doonayo in la helay labada profile aad iyo email.
Marka ay timaado Your Profile:
Haddii aadan hore u tiqiin, aad profile waa in positive iyo Salel - wax kasta oo muujinaya in aad tahay qof keli ah ama aad ugu baahan (major jeedin-off ee haweenka). Waxaad sidoo kale doonayaa in ay hubiyaan in ay u ahaato hadda, sidaa daraadeed waxa uu inta badan u cusbooneysiin haddii aad u baahan tahay inaad (ama marka arrimuhu isbeddeleen noloshaada). Iska hubi inaad adigu saabsan noocyada waxyaabaha aad jeclaan lahayd in la sameeyo iyada oo la siinayo macluumaad aad u badan xaq u off fiidmeerta. Xusuusnow, aad rabto in aad qaban xiisaha marka aad dib u soo email.
Marka ay timaado Your Email:
Hadda, haddii aad ku talo jirto email ka iman kara "taariikhda", aad u baahan tahay in la ogaado sida loo qoro dilaaga ugu horeysay email aragti. email in marka hore kuu soo diri waa in uu ahaadaa diiran oo ugu Yeedha; waxad raadinayso si ay u muujiyaan qaataha ah in aad tahay oo xiiso leh waana in ay si aad u ogaato. Sidaas, waxa in aragti horeysay email wuxu waa?
1 - Greeting Email Your
Marka aad u hesho profile of qof aad jeceshahay oo go'aan aadna doonayso inaad ku email, aad u baahan tahay in aad ogaato waxa ay ku odhan lahaayeen sameeyo aragti ugu horeysay weyn. Waa in aad bilowdo email ugu off la socda, "Maalin wanaagsan ama habeen ama Hello (username)". U hubso in qofka username waxaa saxda ah loo higaadiyay - ku qor haddii aad leedahay si aad. Qaabka noocan ah ee furitaanka yimaado guud ahaan sida diiran oo ardayda soo dhaweysa.
2 - Isgaarsiinta kooban
Marka ay timaado in qoraal koobi email ugu fiican marka hore, halkaan tip a aad u baahan tahay in maskaxda lagu hayo: wax kale saddex faqradaha badan oo aan waxba ka yar laba faqradaha. Wax kasta oo gaaban ama generic aadan heli doonaa jawaabood, iyo wax kasta oo aad u dheer ka dhigan tahay in aad isku dayayso in ay soo gaarto sida aad ugu baahan.
3 - Hel Ground Common
Marka aad u eegay badan ay profile, waxaan shaki ku jirin in aad wax ka wadaagaan si ay u sheeg email ah. Haddii ay wax cajiib ah in labada wadaag ee caadiga ah, u sheeg waxa ku saabsan. Inkastoo dadka waawayn ay ugu eegi doonaa in aad profile ka dib markii ay email ah ee aad ka heli (iyo haa, Waa in aad profile xuso ciyaartoyda iyo hiwaayadaha aad), waa in aad had iyo jeer ma tirin on this.
4 - Xusuuso Profile-gaarka ah Detail
Ilaa hadda waxa aad ka gudbeen ay profile si taxadar leh, sidaa darteed marka aad bilowdo inaad qortid email, xusin wax gaar ah oo ku saabsan. Ka fiirso hadalka ku saabsan meel ay jirtay ama filim ay aragnay, iwm. oo waxay noqon wanaagsan oo ku saabsan mawduuca. Waxa muhiim ah in aad soo gaarto sida qof wanaagsan haddii aad dooneyso in ay dib ugu soo jawaabin.
5 - Weydii One (Just One) Su'aal Direct
Waxaa habboon in weydiin kaliya hal su'aal si toos ah si aad jawaab ay dib u helaan. Too su'aalo badan oo la arki karo isagoo san weyn leh. U hubso in su'aasha ah waa wax ay wax kama qaba ka jawaabaya.
Waxa muhiim ah in aad xasuusato in ay u abuuraan aragti ah horeysay, labadaba aad profile iyo email u baahan tahay in aad eegto Yeedha - tag oo labadoodaba waxaa ka badan la shanlo ilig ganaax, raadinayso higaada iyo naxwaha qaladaad. Daacad labadoodaba, iyo marka aad qori email in bilowga ah, ilaawa in ay macluumaad guud - qofka aad tahay, da'daada, haddii aad is guursateen, leeyihiin kids, iwm.
Dareenkaa u horeeyaana ma aha oo keliya ee xiriirka fool-ka-fool dambe; waxay sidoo kale online isticmaalo. Iyadoo qaar ka mid ah ka fikirina, waxaad samayn kartaa koobi ugu horeysay ee uu helo jawaabaha aad raadineyso weeyna.
Sidee Cusboonaysii qof ka Park ee Dog